Ndi Social Media erutewo ikike ohuru ohuru? | Martech Zone
Ọganihu mgbasa ozi na afọ ole na ole gara aga adịghị ka ihe ọ bụla anyị hụtụrụla. N'ime njem ahụ, n'ezie, bụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ka anyị na-eleba anya na 2014, enweghị m ike ịjụ ma ọ bụrụ - ọsọ ọsọ ka mgbasa ozi mmekọrịta bilie - ọ eruola ugbu a ikike ya. Anaghị m ekwu na mgbasa ozi ọ bụla dị obere ewu ewu ma ọ bụ na-ekwu na-elekọta mmadụ media ahịa bụ adighi ike, nke ahụ abụghị isi m. Ihe m na-ekwu bụ na obi adịchaghị m mma maka ihe nwere ike ime.
Nnukwu data na ohere iji nwaa ma kpọsaa ga-aga n'ihu na-edozi teknụzụ (ma ọ bụ mebie ya). Isi ihe eji eme mmekọrịta dị ebe a, n'agbanyeghị… anyị nwere mkparịta ụka, onyonyo, na teknụzụ vidiyo. Anyị nwere njikọta mkpanaka na mbadamba. Anyị nwere ikike ịdebanye na mgbasa ozi mgbasa ozi na visibiliti niile. Ọbụna anyị nwere ụfọdụ ọgbọ dị iche iche na-ahapụ Facebook, ụmụ nwoke buru ibu na ngọngọ na ịrụ ụka adịghị ya, ọkaibe kachasị ma nwee atụmatụ dị egwu.
Anyị enweela nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mbipụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nkwado ndị ahịa mmadụ, azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpesa mmekọrịta mmadụ na ibe… m tụfuru ihe ọ bụla? Ihe nyiwe aburula nke oma ma ugbua na etinye onu ogugu na ihe ndi ozo, ndi ahia ahia, na ecommerce system.
Oge enyekwala nkuzi di egwu. Ndị ụlọ ọrụ ghọtara ugbu a otu esi emeso ndị na-emebi iwu n'ịntanetị n'ụzọ dị irè. Ndị ụlọ ọrụ maara ihe zere na-elekọta mmadụ media - ma ọ bụ otu esi eme ya jidere isi okwu ya. Anyị maara na ọ nwere ike ịbụ ebe na-ewetara ndị kasị njọ na ndị na-adịghị mma.
Banyere akparamagwa na mmekọrịta m nke onwe m, achọgharịrị m ọtụtụ afọ iji kụziere onwe m na nyiwe ọhụụ na itinye usoro iji mejupụta nyiwe ndị dị ugbu a. Emeziwo m uche m, na-eji usoro mgbasa ozi na-ekwurịta ma na-ekwughachi ọdịnaya m, ma na-eme ka ndị mmadụ laghachi na saịtị anyị ka ha wee banye ma gbanwee. My kwa ụbọchị, kwa izu, na kwa ọnwa usoro nke na-elekọta mmadụ media na- - amaja m na-ekwu - na-eme ugbu a.
N'ịga n'ihu, achọrọ m ịkwalite iwulite obodo maka iwulite naanị ndị na-ege ntị. Achọghị m igosi gị ngwa ọrụ ọhụụ, achọrọ m isoro gị kwurịta ha. Mana ohere ahụ adịworị taa - ọ bụghị ihe m na-ahụ na-agbanwe n'afọ na-esote.
Ana m apụ na nke a? You na-ahụ mgbatị na uto ọzọ na teknụzụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke afọ a na-abịanụ? Ka na-agbanwe usoro mgbasa ozi gị ka ọ bụ usoro ọ na-adị? Enwere ngwaọrụ ọhụrụ dị n'ebe ahụ ị chọrọ? Ka ànyị nwere ngwa ọrụ niile anyị chọrọ taa?
Tags: Facebookakụkụ anọgoogle +LinkedInTwitter
2014dị Marketingdị Ọdịnaya nke XNUMX
Blog na nso nso a na Harvard Business Review kwuru na mmetụta na-aga n'ihu nke mgbasa ozi ọha na eze ga-etinye onwe ya n'omume kwa ụbọchị nke ọtụtụ ndị ọrụ ga-eme ka ozi ahịa ahụ gbasawanye site na mgbasa ozi mmekọrịta. Nkọwapụta a, n'echiche m dị umeala n'obi, nwere ike bụrụ ihe mkpali iji gbanwee usoro azụmaahịa a na-enweta ugbu a na ụdị azụmaahịa ndị mmadụ na-achụ.
Mgbasa mgbasa ozi ga-anọgide na-emetụta ahịa dị ka ekwentị, redio, TV, wdg na-eme ma nọgide na-eme ya.
2013 - Ndị isi ahịa 25 kacha elu - http://labs.openviewpartners.com/top-sales-influencers-for-2013
Ekwenyere m na mgbasa ozi mmekọrịta ga-anọgide na-emetụta ọ bụghị naanị n'ọma ahịa, kamakwa ndụ kwa ụbọchị.
Ihe m na-atụ anya na 2014, bụ mbilite nke netwọkụ mmekọrịta na-amaghị aha, dịka Duvamis na ChronicleMe.
Dịka ọmụmaatụ, Duvamis na-enye echiche dị iche iche na ọrụ ọhụụ, yana uru bara uru yana
-achọ maka gburugburu ebe obibi nkwukọrịta dị nchebe.